Indoor Outdoor Home Casual Patio White Resin Wicker Outdoor Furniture, wholesale Outdoor Furniture on TopChinaSupplier.com
Ifanitshala yeFoshan Hanbang Co, Ltd.
Umvelisi / umzi mveliso, Inkampani yokuRhweba
Ifanitshala yemvelo yendalo kunye nefenitshala yaselwandle, izihlalo ze Swing, Ifanitshala yamaplanga, Ifenitshala yangaphandle yePolyrattan, ifanitshala yegumbi lokulala
Imarike yekhaya, iNtshona Yurophu, uMntla Melika
UFoshan Hanbang fanicha Co, Ltd, eyasekwa ngonyaka ka-2010, iphuhlise yaya kwinkampani yokuthengisa neyorhwebo neeofisi ezintathu e-Foshan naseGuangzhou zabasebenzi baseofisi abangama-30 kunye neefektri ezi-5, ...
Indawo yokubonelela Furniture Ifenitshala yangaphandle Ingaphakathi lendlu ePhakathi eqhelekileyo Isigulana esimhlophe seResin yeWicker yefanitshala yangaphandle
Ingaphakathi lendlu ePhakathi eqhelekileyo Isigulana esimhlophe seResin yeWicker yefanitshala yangaphandle
Iifayile ze-1 I-US $ 300.00 / Sets
UDali, uYunnan, China
Uthando kunye neRattan
Yonke into esiyenzayo, sikholelwa ekuziseni ixabiso kunye nomgangatho kubaxumi bethu.
Sisoloko silandela umgaqo "weFanitshala esemgangathweni yexabiso kwiXabiso loKhuphiswano".
Ukujongwa kweMveliso kunye neMifanekiso eneenkcukacha:
Ifanitshala yethu ye-rattan yongezwa ngesandla kunye ne-rattan yendawo-enobuhlobo ye-PE kwi-powder eqinileyo-eyindibeneyoI-tal okanye i-aluminium eyakhiweyo ngemisipha ethambileyo kunye nemicamelo. I-cushion zihlala zithathe indawoItyala kwaye iyahlambeka.
1) I-PE Rattan / i-PVC IRattan / i-Poly Rattan / I-Rattan ye-Synthetic: ihlala ixesha elide kunye ne-UV kwaye imozulu imozulu
-Umjikelo weRattan uhlala uqina ngakumbi kune-rattan ethe tyaba kwaye ibiza kakhulu.
-Imibala emininzi ye-rattan ikhona ukuze ukhethe kwaye imibala ifunyenwe kakuhle idweliswe ngolu hlobo: Ukutshintsha kwe-brown, charcoal, brown brown, Cream, Beige, Grey, White, njl.
- Ubungakanani beRattan: Ububanzi bethu bujikelezwe be-rattan ububanzi: 2.4mm, 2.5mm, 2.9mm, 3mm, 3.3mm, njl njl.
2) Ulwakhiwo / fUmsebenzi wobugcisa: Umgangatho ophezulu kunye nomgubo ophucukileyo
--NdomeleleIsakhiwo se-tal samkelwa ukuba asibuzwa. Ubume beAluminiyam bunokwenziwa ngeendleko eziphezulu. Ulwakhiwo lweAluminiyam lukhaphukhaphu kwisisindo.
3) Iikhuseli kunye nemicamelo: ubungqina be-manzi kunye ne-zipper, enokuhlaziywa kunye nokuhlanjwa
-Ubunzima bethu bomsi omkhulu: 5mm, 8mm, 10mm, 15mm, 18mm, njl.
Nceda cosenzele ezinye iinketho.
Bungakanani ubungakanani kunye nomthwalo wokulayisha kwisitya?
Ubungakanani bethu obuqhelekileyo bubonakalisiwe kumfanekiso okanye njengoko kuchaziwe. Senza nobukhulu ngokweemfuno zabathengi bethu. Nceda coNtact abameli bethu bokuthengisa.
Ifenitshala yethu ye-rattan ingasetyenziselwa zombini ngaphakathi nangaphandle. Isetyenziswa ngokubanzi kwiihotele, iivenkile zekofu, iibhalkhoni, iipatio, amagumbi okulala ilanga, amagumbi okuhlala, amagumbi okulala, iigadi, izindlu zezindlu, kufutshane namachibi okudada, amaxesha okuzonwabisa, njl.
Itheyibhile ye-FC066 kunye noSihlalo
Itafile ye-FC062 enezitulo ezi-4
Itafile ye-FC065 kunye noSihlalo
Itafile eQinisekisiweyo ye-FA112 kunye noSihlalo
Itheyibhile engamaXande ayi-R9003 nezihlalo ezisi-8
R9002 # 2M Round Sunbed nge okanye ngaphandle kwe Canopy
I-HB-1016 izihlalo ezimbini ezijingayo
UKUTHUMELA NOKUQHUBA IXESHA:
1. Kwimibandela ye-ExW, umthengi uya kwenza amalungiselelo okuphuma kumzi-mveliso wethu eFoshan, eGuangdong.
2. Kwimibandela ye-FOB, silungiselela ukusiwa kweyona ndawo isondeleyo eTshayina njengeHuangpu okanye iNansha, iGuangzhou okanye i-Yatia, Shekou, Chiwan, Shenzhen, China njenge-Internatioimigaqo yezentengiso ye-nal.
3. Kwimibandela ye-C & F okanye ye-CIF, silungiselela ukuhanjiswa kwiindawo zokufikela elwandle zabathengi ngokwangaphakathiimigaqo yezentengiso ye-nal.
Nceda uhlale ucacisa ubungakanani beodolo yakho kunye nemigaqo yokuhambisa oyifunayo kwimibuzo.
4. Ngokwesiqhelo iveki enye yee-odolo zokulingwa kunye 1 month for co epheleleyoimiyalelo ye-ntainer.
1. Ngu-escrow, unio wasentshonan, iMoneyGram, okanye ukudluliselwa kocingo ngee-odolo ezincinci ezingaphantsi kwe-5000usd / iodolo kunye neesampulu zeodolo.
2. Ngokudluliselwa komnxeba, ileta yetyala, i-documents ngokuchasene necala lokufaka iiodolo ezinkulu okanye i-co epheleleyoimiyalelo ye-ntainer.
3. Zonke iintlawulo zebhanki okanye zee-commissions ezihlawulwe liqela lesithathu zikwi-akhawunti yabathengi.
Kutheni ukhetha ifanitshala yeHanbang?
1. Siyi-Alibaba iqinisekiswe ngeminyaka eyi-5 yokuBonelela ngeGolide ngokuzibophelela kwintsebenziswano yexesha elide
2. Sineefektri zethu eFoshan, eGuangdong, ezityalwe kwaye ziqhutywa nguHanbang onamava kunye ne-respoAbalawuli befektri abasebenzayo.
3. Sigcina isitokhwe esifanelekileyo sefenitshala eyamkelweyo kakuhle ngaphandle kobuncinci beemfuno zobungakanani beemodeli zethu eziqhelekileyo.
4. Sizimisele akukho mfuneko ubuncinane ubungakanani odolo ifanitshala ephothiweyo ngesandla iisampulu kunye odolo kwetyala.
5. Sinika uluhlu olubanzi nolugqibeleleyo lwefanitshala eyenziwe ngesandla kunye nefenitshala yefenitshala ye-selecUmxholo kunye ne-OEM yamkelwe.
6. Iifektri zethu zivaliwe kwiNtengiso yefanitshala eyaziwayo yeFoshan, cokulula kulungiselelo lokuhamba kwempahla ngokukhululekileyo.
7. Sino-profioIqela le-nal lokuthumela kwelinye ilizwe. iprompt kunye ne-respo echanekileyonse inokufezekiswa.
ISebe Lokuthengisa, iworkshop kunye neMiboniso
Imibuzo ebuzwa rhoqo (i-FAQ):
I-Q1: Yeyiphi i-oda yakho ubuncinci?
A: Asinawo ubuncinci be-odolo yobungakanani be-odolo kwifenitshala ephothiweyo yesandla.
Q2: Liliphi ixesha lakho lokuhlawula?
A: Silwamkela ngokubanzi ugqithiso ngetelegraphic, iipesenti ezingama-50 ezantsi zokuhlawula kunye nemali eseleyo phambi kokuziswa.
Samkela ne-L / C kumbono, D / P, kwi-unio yasentshonan, Escrow, MoneyGram, kuxhomekeke kumyinge we-odolo yakho kunye namaxabiso kunye nokuthembeka.
Q3: Lixesha lakho elingakanani?
A: Ngokwesiqhelo kwiinyanga ezi-1 ukuya kwezi-2. Iisampulu kunye neestokhwe zikhawuleza nje ngosuku olunye lomsebenzi ukuya kwiveki e-1.
I-Q4: Ngaba uyayamkela uyilo olwenziwe ngokwezifiso?
A: Ewe, i-OEM yamkelwe. Singenza aslo logo yakho okanye ngethegi yesandla sakho kunye noshicilelo ibhokisi, njl
Q5: Kuthatha ixesha elingakanani ukuphendula imibuzo?
A: Ngokwesiqhelo ngaphakathi kosuku olunye lomsebenzi.
I-Q6: kude kangakanani iifektri zakho?
A: Nanhai, Foshan, China, iziko lemveliso
Malunga neyure enye ukusuka kwiNtengiso yeFenitshala yeFoshan ngemoto
Kujikeleze iyure e-1 ukusuka eGuangzhou InternatioI-Airport ngesithuthi
Jikele ngeyure ebenye ukusuka eGuangzhou Pazhou Complex ngemoto
I-Q7: Yintoni isiqinisekiso sakho kumgangatho?
A: Ngokwesiqhelo unyaka omnye emva kokuthunyelwa ngokuchasene nesiphene semveliso, kodwa ifanitshala yethu ingasetyenziswa ngaphezulu kweminyaka eli-10 xa igcinwe kakuhle
I-Q8: Ithini intengiso yakho?
A: Imarike yase China: 60%
Nceda usithumelele i-imeyile ngobungakanani beodolo yakho kunye neemfuno zakho zesibonelelo esifanelekileyo nesisebenzayo. Umbuzo wakho uhlala uphendulwa kungaphelanga usuku olunye lomsebenzi.
US $ 0.00 / Isiqwenga
Ifenitshala yePatio yeAluminium Powder edityanisiweyo yangaphandle yeRattan yefanitshala yefanitshala
US $ 350.00 / Beka
I-China Factory Supply Design Uyilo olukhethekileyo lweAluminiyam Isakhelo somyezo weHMade Samani yeFenitshala
Indlu yangaphakathi ePhakathi eqhelekileyo i-Patio White Resin Wic
US $ 300.00 / Iiseti
Isithuba esigcina igadi Rattan cube cwangcisa itafile
US $ 200.00 / Iiseti
Izitulo zangoku zokuhlala igumbi lendlu Rattan Swing Ch
US $ 90.00 / Isiqwenga
Umvelisi weFoshan eNtsha yeFashoni yaMva yeFashoni
Ngaphandle Wicker Patio rattan cube yegadi 11 isiqwenga
US $ 80.00 / Iipayile
Immimiselo & nemiqathango Isibhengezo umthetho wabucala Ifanitshala yeFoshan Hanbang Co, Ltd.